Raw YK-11 Powder (431579-34-9) Vagadziri - Phcoker Chemical
YK-11 powder ndeyeboka rinosarudza uyerogen receptor modulators (YK11 powder). Chaizvoizvo, zvinoita YK11 inosarudza ……
YK11, inozivikanwawo seMyostine, inoonekwa seimwe yeiyo yakasimba YK11 poda pamusika. Iyo ndeye synthetic steroidal inosarudza androgen receptor modulator. Mushonga wacho une anabolic zviitiko mu vitro muC2C12 myoblasts uye inoratidza yakakura potency kupfuura dihydrotestosterone (DHT) mune izvi. YK11 zvakare iri Myostatin inhibitor. vanogona kukubatsira kuti uwane tsandanyama uye kurasikirwa nemafuta.
Kirasi yeMishonga YK11 powder
Vazhinji vashandisi vanofunga kuti YK11 ndiyo kiyi yekuvhura iyo yakazara muviri uye kugona kuwana nekukurumidza mhasuru kunowana kune mashoma mativi. Izvo zvakare zvakataura kuti YK11 inokwanisa kuderedza myostatin chiitiko, ichiita iyo myostatin inhibitor. Iyo YK-11 zvirokwazvo ndeimwe yeiyo yakasimba ipapo. Iwe haugone kunyatsofananidza YK kune LGD-4033 kana chero zvigadzirwa nekuti yakasimba sei.
Nekudaro, kunyangwe YK-11 mbishi yakasviba yakasimba kwazvo ziva kuti kune kungoitwa zvishoma mashoma akaitwa nekanzuru iyi. Ichi ndicho chikonzero chikuru vanhu vazhinji vanoita sekuti vaende nevamwe seOstamuscle, RAD-140 kana GW-501516.
YK11 iri kuwana kufarira kubva kuvaki vemuviri nekuda kwekugona kwayo kukurumidza kuvaka mhasuru ine mashoma mativi mativi.
Inowedzera Muscle Size
YK11 iine kugona kunoshamisa kukurudzira tsandanyama kukura.
◆ Inosimbisa Mapfupa
Mahormone ebonde akakosha pakuchengetedza mapfupa akasimba uye ane hutano. Uchapupu huripo hunoratidza kuti YK11 poda yakasviba inogona kuwedzera simba remapfupa nekuzvisunga kwayo kune androgen receptors.
Vavaki vemuviri vakamboshandisa YK11 poda yakasviba vanoti kuitora mumapiritsi gumi kusvika gumi neshanu mg pazuva inoshanda kwavari. Vamwe vakashuma zvakanaka pama10 mg pazuva. Vazhinji vashandisi vanoitenderera kwemavhiki mana kusvika masere.
Mhedzisiro mativi eRaw YK-11 poda (431579-34-9)